Racfaanka laga qaato go’aanka laanta socdaalka oo la filayo inuu kor u kaco | Somaliska
Laanta socdaalka dalkaan Iswiidhan ayaa aaminsan in tiradda dadka racfaanka ka qaadan doona go’aanadda laga gaaray ay kor u kici doonaan sanadkaan gudihiisa. Tiraddan ayaa la filayaa ineey kor u dhaafto 32000 oo kiis, waana mid saddex jeer ka badan labadii sanno ee la soo dhaafay.
Arrintan ayaa loo aaneynayaa in ay ugu wacan tahay in dadyow badan oo nabadgalyo weeydiistay dalkaan ay heli doonaan diidmo. Sidaana waxaa maanta sheegtay idaacadda raadiyo Iswiidhan qeybteeda u qaabilsan wararka ee Ekot, oo soo xiganeeysa Fredrik Bengtsson oo ah direktoorka isgaarsiinta ee laanta socdaalka.
“Sanadkii hore waxeey aheyd mid dadyow badan oo ka yimis Eretereya iyo Suuraya oo tiradooda aad u badneynd, hadase waa qowmiyado kale oo tirakoobkoodu aad u yar tahay. Taasi oo ay ka dhigan tahay dadyowga la siin doona diidmadda ay aad u badnaan doonto.